Surgeon ethembisa bokuqala ikhanda ukufakelwa kwenza pitch US odokotela - Izindaba Rule
Surgeon ethembisa bokuqala ikhanda ukufakelwa kwenza pitch US odokotela
Lesi sihloko osesikhundleni “Surgeon ethembisa bokuqala ikhanda ukufakelwa kwenza pitch US odokotela” lalotshwa Sam Thielman in Annapolis, ngoba theguardian.com ngoMgqibelo 13th June 2015 12.38 UTC
NgoLwesihlanu ntambama ngesikhathi Westin Hotel in Annapolis, Maryland, kanye zokuzithandela for the bokuqala ikhanda ukufakelwa esesifubeni sakhe, Dr Sergio Canavero bazama ukuthola odokotela abahlinzayo uzimisele ukuba umsize enze inqubo kusukela nezilaleli odokotela akubo emhlanganweni wonyaka American Academy of kwemizwa kanye Yezokwelashwa Kwamalunga neMisipha Odokotela abahlinzayo.
Cishe ingxenye yesine ka bahlalaphi sanikelwa isiqophi amakhamera, tripods namalambu zezitsha. Ukuze uthole udokotela press-friendly to the phambi kwekamelo, omunye ababekhona kwakufanele athathe microphone yesikhulumi bese ziyakhonya engena eKings Park ezungezile Canavero: "'Scuse kimi, cindezela, Ngithanda ngawe ukuba ahlukane, Ngiyacela. Sakwanele. "
Isihloko eyisihluthulelo Canavero lalingu inqubo uthemba ukwenza in the next 24 izinyanga, alibiza ngokuthi ikhanda Anatomosis Venture, noma "Heaven".
"Namuhla ngilapha ukuba asinike konke umbono,"Canavero kusho.
Udokotela wanezela ukuthi kwakungekho into efana self, nokuthi umgomo yokugcina project yakhe kwaba ukuphila extension.
Amahora amabili nesigamu (isethulo kwakuhlelwe 90 amaminithi) phambi kwezethameli ezingu-esikhatsini lesinyenti blue- futhi grey-zizwana abahlinzayo oseqinile, Canavero kuhambisane nesivinini sokufunda komfundi ububanzi egumbini eside e cream slacks kanye ingubo iba nsundu ngokubomvu, bespectacled, agunde ikhanda, looking like an monk ikakhulukazi hip.
Sergio Canavero othi yena uzokwazi afeze ukufakelwa ikhanda. Photograph: Youtube
Wachitha iningi-ihora nengxenye yokuqala kokudubula off aphorism emva aphorism, abanye abalobi kuhlanganise Kierkegaard futhi Arthur C Clarke, abanye of abaceba yakhe.
"Uma Izulu budedengu, imvelo crazier, kanye nemvelo kumele inikezwe ikhefu lapho kuziwa kulokho akwenzayo kithi sonke njengoba izidalwa kule planethi,"Uthe.
The ohlinza izinzwa, of Italy eTurin Advanced Neuromodulation Group, esiphenduka phakathi ezama ugqozi izilaleli zakhe, kokucwaningisisa Neurobiology futhi goading ochwepheshe bezokwelapha onezinwele ezimhlophe babebuthene phambi kwakhe. Ngesinye isikhathi wafanisa impumelelo inqubo yesikhathi esizayo ukuze ukufika inyanga, ngesithombe of JFK on the screen ngemuva kwakhe.
"Thina kumele uye inyanga ukuhlola ukuthi singobani, ukuhlola amakhono ethu, ukuhlola abe ithemba lethu, ukubona ukuthi hlobo luni amadoda thina!"Uthe.
"Kumelwe ukwenze ukuhlola America! Sifanele sikwenze ukuze ubone uma namanje baseMelika! Uma Ngakhula America kwaba phezulu. "
Othembisayo pay okusezingeni and Esekelwa kusukela "abacebile American", Canavero utshele umhlangano: "Ngafika kini; Ngasamukela ngenjabulo lesi simemo ukuba ngokuthobeka eze phambi kwakho ukwenza icala ukuthi kuyenzeka lokhu. "
Uthe afuna ukwenza inqubo kungaba US noma China.
Ukuthobeka kwakungeyona izinga izilaleli babebonakala babone Canavero.
"Wena bonke abantu babe nomuzwa ocacile of self, hhayi kohliso,"Kusho udokotela wokuqala nokuphonsa mbuzo Q&A session. "Yini Ukuzithanda isiguli? Isidumbu entsha, noma self ukuthi unesifo nge?"
"Mbuze wena,"Canavero kuphendula.
Valery Spiridonov, the umuntu owake wavuma ngokuzithandela ukwenza ibhekane inqubo, wakhuluma kancane emcimbini, kodwa yena kwaba sibalo nesithakazelo esikhulu. Spiridonov has Werdnig-Hoffmann isifo, noma yoma umgogodla kwemisipha. Kuyinto esiwohloza umzimba, isimo ekugcineni bulalayo ukuthi yaba nemiphumela ebonakalayo emzimbeni Russian engu-30 ubudala. Spiridonov imeyili Canavero aphume blue lapho project udokotela waqala ukuthola press ukunakwa.
Valery Spiridonov: 'Ngikholelwa umzimba wami nje Mechanics ukuthi ngifuna ukhiphe' Photograph: CORBIS
Spiridonov waphendula umbuzo.
"Ngikholelwa umzimba wami nje Mechanics engifuna ukhiphe,"Uthe. Wakhuluma kokuba ukuqasha abantu ukumsiza esikhundleni sakhe ngesihlalo sabakhubazekile encane eduze esigabeni.
Abanye odokotela, Said Canavero, baye bangabaza noma cha okusezingeni rejection izinga radical ngesitho nezitho zomzimba bafakelwa kungase kusho ukuthi full-body ukufakelwa isiguli esingase ukuphuma engqondweni yakhe. Canavero wabatshela ukuba sicabange ngokwabo endaweni Spiridonov sika.
"Ungakholwa yini ukuthi isimo yakho ingase ukushayela ukuba uhlanya, ukuze Madness?"Wabuza Spiridonov.
"Yebo,"Spiridonov kuphendula. "Nsuku zonke."
Kuthiwani anterior Umthambo umgogodla?
Omunye umbuzo, kunjalo, kuba noma cha lo msebenzi kungenzeka. Canavero bakhomba amabombo bafakelwa e amagundane ngempumelelo e China, futhi wathi glycol polyethylene (PEG) - Elivame ukusetshenziswa njengendlela laxative, kodwa iye ayithola izicelo iziguli umgogodla ukulimala - babekwazi ngokuyisisekelo unamathisela izikhungo motor emgogodleni babuyelane ngempumelelo ngemva kokuba hhephuna.
Omunye udokotela iphazanyiswe Canavero phakathi inkulumo yakhe ukuba aveze ukuthi, njengoba udokotela ohlinza imithambo yegazi, wayekhathalela, phakathi kwabanye, the anterior Umthambo umgogodla.
"Uneminyaka gonna onqamula ukuthi,"Uthe. Canavero wammema ukuhlanganyela neqembu lakhe yokusebenza, wathi ayekwenzile ingxenye yakhe futhi kwase kuyisikhathi sokuba ukwandisa.
Odokotela zazihlukaniswa yini noma cha ukwenza inqubo ngaso sonke. Okuwukuphela kwento angayenza ukufakelwa ikhanda nezimiso zokuziphatha?
"Angazi,"Kusho Oscar Tuazon, udokotela ohlinzayo ezinze Alexandria eseduze. "In abantu, into eyinhloko ikhanda! Umzimba nje uhlaka noma igobolondo. Ngakho-ke ikhanda ukuthi kubalulekile. Kungenzeka, ake sithi, uma umuntu omkhulu, like Einstein, mhlawumbe ungase amgcine. "
Tuazon ngqungquthela nge Edith Tuazon, umhlengikazi nomkakhe 44 iminyaka. Wayengumngane Engagculisekile.
"Engizizwa like it uya kude,"Wathi. "Ake sithi ukufakelwa inhloko umuntu ubani nomdwebi laqhubekela nomuntu akuyona nomdwebi -Ingabe lowo muntu akwazi ukwenza izingalo nezandla zisengawenza? Ingabe isandla namanje 'cabanga?'Ingabe ukucabanga njengoba kwenzeka ngaphambi? Kanjani bonke labo imisebenzi ukuya emsebenzini ndawonye?"
Canavero kwadingeka impendulo yakhe ukuba nalowo muntu isethulo: "Wena ukusika spaghetto, wenza isicelo PEG, futhi boom. "
cwaningo New othi ukuthola isixhumanisi ezihlukahlukene zofuzo phakathi Crea ...
Amehlo we-Apple iPhones entsha
18592	0 Isigaba, Abacwaningi bezokwelapha bazishaya, Izindaba, Sam Thielman, Isayensi, izindaba US, izindaba World
← cwaningo New othi ukuthola isixhumanisi ezihlukahlukene zofuzo phakathi lokusungula ukugula ngengqondo The 11 PlayStation imidlalo ngokuphelele akakwazi miss ngonyaka ozayo →